पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि चौरी महोत्सव
२०७५ अश्विन ३ गते बुधबार
२०७५ बैशाख २८, शुक्रबार
पोहोरको बर्खामा खिम्ती खोलाको बाढीले सदरमुकाम र राजधानी तथा तराईबाट रामेछापको उमाकुण्ड र गोकुलगंगा गाउँपालिका जाने सडकमा ठूलो क्षति पुर्यायो । बाटो बगाएपछि उमाकुण्ड र गोकुलगंगा गाउँपालिका पूरै नाकाबन्दीमा परे । तर, सडक डिभिजन कार्यालयले ६ महिनाभन्दा पहिले बाटो बनाउन नसकिने बतायो । कसैले बनाउन सकिँदैन भनेको त्यो बाटो उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले गोकुलगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग सुनुवारलाई साथ लिएर आफैले ढुंगा पल्टाएर एक हप्ताभित्रै खुलाए ।
गाडी नकिनेर डोजर र टिपर
अन्य गाउँपालिका विकास योजनामा अलमलिइरहँदा उमाकुण्डले भने विकासको पूर्वाधार र आधारस्तम्भ तयार पारेको छ । ७ वटा वडा रहेको सो गाउँपालिका रामेछापको सबैभन्दा विकट र दुर्गम क्षेत्र समेटेर बनेको छ । सडक सञ्जालले समेत सबै वडामा छोएको छैन । उनकै कारण अहिले ३ वटा वडा बाह्रै महिना सडक चल्न सक्ने अवस्थामा छन् । बाँकी वडालाई पनि यस वर्षबाट नियमित यातायात चल्ने बनाउने योजनाका साथ काम भइरहेको सुनुवारको भनाइ छ ।\_
गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र सगरमाथा आधारशिविरको प्रवेशद्वार समेत रहेको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा पर्यटकहरुलाई विविधताको अनुभूति दिने योजना उनको छ । त्यसैले प्रितीको तामेमा भ्यू टावर र प्याराग्लाइडिङ स्पट बनाउने योजना छ । ‘त्यहाँ त एक सय मिटरभन्दा लामो चिप्लेटी खेल्ने ठाउँ पनि छ । हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौं, त्यसको प्रचार भएपछि पर्यटकहरु आइहाल्छन् नि,’ उनले ढुक्कका साथ सुनाए ।
किसानलाई अनुदान र काम
सुनुवारले किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्न गाउँपालिकाबाट अनुदान दिन बजेट छुट्याएका छन् । किसानले आलु, चिया, जडीबुटी, तरकारी लगायतमा यस्तो अनुदान पाउने छन् । यो अनुदानबाट उत्पादन गरेको उपज सहकारीमार्फत गाउँपालिकाले खरिद गरी बजारसम्म पुर्याइदिने छ । ‘बिचौलियालाई किन खान दिनु ? किसानको उत्पादन सोझै बजारमा पुगोस् न । अलिअलि बचेको त्यही किसानहरुले नै बनाएको सहकारीमा बसोस्’, आफ्नो योजना सुनुवारले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको सुनाए, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा लालच रहेछ । सबैले लालच छाडिदिने हो भने विकास आफै हुने रहेछ ।’
चौंरी महोत्सवको तयारी
चौंरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको गहना मात्र हैन, आयआर्जन र पर्यटन प्रवर्धनको बलियो आधार पनि हो । त्यसैले चौंरी र चौंरीपालन व्यवसायलाई प्रबर्धन गर्ने योजनामा छन् सुनुवार । त्यसका लागि यस वर्ष मात्रै २२ लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । यसबाट किसानलाई चौंरीपालनका लागि अनुदान दिने, चौंरी र यसको दूधजन्य उत्पादनको महत्वबारे जानकारी दिई पर्यटन र व्यवसाय प्रवर्धनका लागि सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।
नवराज पाथीकका अन्य लेख तथा रचनाहरु
अध्यक्ष प्रचण्ड सिंगापुर गएपछि ‘नेकपाका नेताहरु वेरोजगार !’
नमुना कानुनी प्रक्रिया
मेयरले डोजर सिक्दा पत्रकारसहित ५ घाइते !
मिहिनेत गरेर सुन लगाउनेहरुको कथा
मुस्ताङको स्याउ गोदाममै थन्कियो
लाक्पाछेती शेर्पा ‘कृषिबाट करोडपति’
१२० दिन अघि
१४२ दिन अघि
१३२ दिन अघि